Nepali Christian Bible Study Resources - पशुहरू
» अध्ययन मालाहरू » बाइबलकालीन चलनहरू » ८-पशुहरू
बाइबललमा हामी पशुहरूलाई बलिदान दिइएको कुराहरू पढ्छौं। यी कुराहरू आज हामी गर्दैनौं। हामी पशुहरू मारेर खानको लागि तयार पार्छै तर तिनीहरूलाई बलिदान दिनको निम्ति मार्दैनौ। यहूदीहरू पनि आज पशुहरूको बलिदान गर्दैनन्। यहूदीहरूको बलिदान गरिने वेदी चाहिँ मन्दिरमा थियो र आज यहूदीहरूको मन्दिर छैन (ई सं ७० तिर रोमीहरूले मन्दिरलाई ध्वस्त पारे)। त्यसैले आज इस्राएलका सन्तानहरू "_________________ बिना" छन् (होशे ३:४)।
पशुहरूको बलिदान चाहिँ आउनेवाला ख्रीष्टको सिद्ध बलिदानको _________ मात्र थियो -- हिब्रु १०:१। तपाईं कुन कुरा चाहनुहुन्छ - हजार रुपियाको छायाँ कि वास्तविक रुपियाँ - के तपाईं आइसक्रिमको छायाँ खानुहुन्छ कि आइसक्रिम नै खानुहुन्छ - छायाँले तपाइँको निम्ति केही गर्दैन, तर त्यसले त्यहाँ वास्तविक कुरा छ भनेर बताइरहेको छ। यदि त्यहाँ आइसक्रिमको कोन नहुने हो भने के त्यहाँ त्यसको छायाँ हुन सक्छ र? __________। पशुहरूको बलिदानले यो सन्देश बोकेको थियो:
"एकदिन परमेश्वरको पुत्र मानिसको पापको निम्ति सिद्ध बलिदान हुनुहुनेछ"। जब हामी ख्रीष्टको बलिदानको बारेमा सोच्दछौं, त्यही तीनओटा सत्यताहरू पाउँदछौं।
दोस्रो चाहिँ मत्ती २३:२४ मा पाइन्छ। कहिलेकाहीँ साना किराहरू पिउने पदार्थहरूमा पस्छन् र फारिसीहरू पिउन अघि किराहरूलाई निकालेर पिउन होशियारी थिए। के तपाईंले आफ्नो पिउने कुरामा किराहरू पाउनुभएको छ? यदि एउटा किरा तपाईंले अचानक पिउनुभयो भने, के यसले तपाईंलाई मार्दछ र? येशूले यी कुराहरू यहूदीहरूलाई भन्नुभयो, "तिमीहरू एक सानो किरा ननिल्नलाई धेरै सावधान छौ, तर तिमीहरू हेर्दै नहेरी सीधै उँट भने निल्दछौ"। के तपाईंले आफ्नो पिउने कुरामा उँट पाउनुभएको छ? यदि तपाईंले उँट निल्नु भएको छ भने, के एउटा किरा निल्नु भन्दा यो झन् गम्भीर कुरा होइन र?
प्रभु येशू जान्नुहुन्थ्यो कि मानिसले साँच्ची नै उँट निल्दैनन् भनेर, तर उहाँले यो मूर्ख उदाहरण चाहिँ एउटा घतलाग्दो पाठ सिकाउनको लागि दिनुभएको थियो। यी यहूदीहरू सबै साना कुराहरूको बारेमा चासो राख्दथे, तर तिनीहरू ठूला र महत्त्वपूर्ण कुराहरू जस्तै "न्याय, कृपा र विश्वास" को विषयमा भने वास्तै राख्दैनथे (२३ पद)। यी मानिसहरूले सबै किसिमको धार्मिक रीति र नियमहरू पालन गर्थे, र तिनीहरू सो गर्नाले आफूलाई धेरै धर्मी ठान्थे, तर जब परमेश्वरको पुत्र तिनीहरूकहाँ आउनुभयो तब तिनीहरूले नै उहाँलाई क्रूसमा टाँगे!
मानौं तपाईंको शिक्षकले भन्नुभयो, "यो परीक्षामा ११ ओटा प्रश्नहरू छन्। पहिलो दशओटा महत्त्वपूर्ण छन् भने अन्तिम प्रश्न चाहिँ त्यत्ति महत्त्वपूर्ण छैन र त्यसलाई त्यति धेरै मान्यता दिइनेछैन।" अनि तपाईं त्यो अन्तिम प्रश्नको लागि आफ्नो सबै समय खर्च गर्नुहुन्छ र १० ओटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई समय दिनुहुन्न भने के तपाईं जाँचमा फेल हुनुहुने छैन र? ____________। जब यहूदीहरूले परमेश्वरसँग ठीक सम्बन्ध राख्‍नुपर्ने समय पाए, तब फारिसीहरू फेल भए ।
आज हामी कुकुरहरूलाई "मानिसको असल साथी" को रूपमा हेर्दछौ र एक राम्रो पाल्तु पशुको रूपमा पाल्दछौं। आज हाम्रो समयमा सबैले कुकुरलाई असल पशुको रूपमा हेर्छन्।
प्रकाश २२:१५ मा "कुकुरहरू" भन्ने शब्द ती मानिसहरूको लागि प्रयोग भएको छ जसलाई पवित्र शहरमा छिर्न अनुमति छैन। यसको मतलब ती मानिसहरू फोहोरी, अपवित्र र अशुद्ध छन्। पवित्र परमेश्वरको बारेमा तिनीहरूलाई कुनै चासो छैन। स्वर्गमा "कुकुरहरू" हुनेछैनन्!
बाइबलीय समयमा सबभन्दा डरलाग्दो पशु सिंह थियो होला। आज प्यालेस्टाइनमा सिंहहरू पाइँदैनन्, तर बाइबलीय समयमा सिंहहरू ती भागहरूमा घुम्थे। "सिंह" भन्ने शब्द बाइबलका ३१ ओटा पुस्तकहरूमा पाइन्छन्।
« बिरुवाहरू र रूखहरू